Al Bashiir xaguu ka helay Lacagta Malaayiinta Dollar ee laga helay gurigiisa ? | Salaan Media
Madaxweynihii hore ee dalka Sudan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa markii xilka laga tuuray gurigiisa ciidamada amaanka dalka Sudan waxa ay kasoo heleyn lacag malaayiin Dollar oo kaash ah iyo Hadiyado kale oo qaali ah.
General Abdel Fattah al-Burhan oo ka hadlay howlgalkii ciidamada ka sameeyeen guriga Al Bashiir ayaa sheegay xiligaas in ka badan 113 milyan oo dollar oo ah kaash ka kooban saddex lacago qalaad ah laga helay guriga Al-Bashiir.
Madaxweynihii hore ee dalka Sudan oo shalay kasoo muuqday Maxkamad ayaa lagu eedeeyay dambiyo ay kamid ahaayeen inuu si sharci darra ah u heystay lacag qalaad iyo inuu hadiyado ku helay si sharci darro ah.
Cumar al-Bashiir oo 30-sano ka badan maamulaay dalka Sudan ayaa u sheegay baarayaasha kiiskiisa in lacaga malaayiinta dollar ee kaashka ah uu ka helay dalka Boqortooyada Sacuudiga.
Lacagtan ayaana la ogeyn in si shakhsi ah u siiyeen Al Bashiir oo kamid ahaa xulufada dalkaasi Sacuudiga taageersanaa, lacagtan uu Sacuudiga ka helay Al Bashiir uu gurigiisa dhigtay ayaana qeyb ka ah dambiyada loo heesto.